ပဲခူး-ရန်ကုန် ကားလမ်း၌ ဟိုင်းလတ်ယာဉ် တစ်စီး နောက်ဘီးနှစ်လုံး ကျွတ်ထွက် တိမ်းမှောက်၊ ခရီးသည? - Yangon Media Group
ပဲခူး-ရန်ကုန် ကားလမ်း၌ ဟိုင်းလတ်ယာဉ် တစ်စီး နောက်ဘီးနှစ်လုံး ကျွတ်ထွက် တိမ်းမှောက်၊ ခရီးသည?
ပဲခူး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၆
ပဲခူး-ရန်ကုန် ကားလမ်းမကြီး ပဲခူးမြို့နယ် ဥဿာ မြို့သစ် (၉)ရပ်ကွက်အနီး ဒီဇင်ဘာ ၂၅ရက် ညနေ ၅နာရီက ခရီးသည်တင်ယာဉ်တစ်စီး နောက်ဘီးကျွတ်ထွက်၍ ယာဉ်တိမ်းမှောက် မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှ ယာဉ်ပေါ်ပါ လူဆယ့်တစ်ဦး ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ပဲခူး-ရန်ကုန်ကား လမ်းမကြီးအတိုင်း ပဲခူးဘက်မှ ရန်ကုန်ဘက်သို့ ယာဉ်မောင်း ဂျစ်တူး ရှမ်းတန်း ၈လမ်း ကျောက်ကြီး စုရပ် ပဲခူးမြို့နေသူ မောင်းနှင်လာသည့် ယာဉ်အမှတ် L—– HILUX အဖြူရောင် ခရီးသည်တင်ယာဉ်သည် ပဲခူး-ရန်ကုန် ပဲခူးမြို့ မြန်စတားအထည်ချုပ်စက်ရုံအနီး အရောက်၌ ဝဲ/ယာနောက်ဘီး ကျွတ်ထွက်၍ မိုင်တိုင်အမှတ် ၄၃/ ၂နှင့် ၄၃/၃ကြားတွင် တိမ်းမှောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်ကြောင့် ယာဉ် ပေါ်ပါ ယာဉ်နောက်လိုက် စည်သူ (အသက်/အဘ/နေရပ်-စုံစမ်းဆဲ)မှာ သတိလစ်မေ့မြောနှင့် ခရီးသည်များဖြစ်သော နော်ထွေး၊ ဦးစိုးပိုင်၊ ကိုကျော်စိန်သန်း၊ မနှင်း ဝေဝေလွင်၊ မဇင်မာသိန်း၊ မပန်း အိဖြူ၊ ဦးမြင့်အောင်၊ မောင်စိုင်းသူနိုင်၊ မသွယ်သွယ်စန်း အမည်၊ အသက်၊ နေရပ်လိပ်စာ-စုံစမ်းဆဲအမျိုးသားတစ်ဦးတို့မှာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့သဖြင့် ပဲခူးဆေးရုံ သို့တင်ပို့ပေးခဲ့ရပြီး ယာဉ်မောင်း ဂျစ်တူးမှာ အခင်းဖြစ်နေရာက ထွက် ပြေးတိမ်းရှောင်သွားကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်ကြောင့် ယာဉ်အား မဆင်မခြင်မောင်းနှင်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားသူ ဂျစ်တူးကို ပဲခူးမြို့မယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းက ယာဉ်(ပ)၁၁၄/၂ဝ၁၇၊ ရာဇ သတ်ကြီးပုဒ်မ-၃၃၇/၃၃၈/၂ဝ၂ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားသည်။
အောင်လံမြို့နယ် ရွာထောင် ရပ်ကွက်ရှိ ဝါဂွမ်းဂိုဒေါင် တစ်လုံး၌ အပူကြောင့် မီးလောင်မှုဖြစ်ပွာ
(၂၁)ရာစု ပင်လုံတတိယ အစည်းအဝေးတွင် မြောက်ပိုင်း လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ကို ဖိတ်ကြားမည်ဖြစ်သော်လည်?
ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးရုံးတည်ဆောက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြရန် လာရောက်သော ကျေးရွာခြောက်ရွာမှ ဒေသခံများအား ရဲတပ်ဖွဲ့က မြို့အဝင်တွင် တားဆီး